Hery - Tsiky dia ampy | Desambra 2008
Noely toa inona?
2008-12-25 @ 20:00 in Izaho sy ny ahy
Efa taona maro nifanesy izay dia tsy mba mandefa fiarahabana noely amin'ny alalan'ny email tahaka ny ankamaroan'ny olona aho. Ny fialàna tsiny tamin'izany dia hoe satria ny ankamaroan'ny mpandefa ireny email ireny dia tsy mahalala akory hoe iza no handray azy... satria alainy daholo ny adiresy ao amin'ny lisitra ananany dia andefasany firariantsoa dika mitovy. Nony nolazaina anefa aho hoe mandefasa aza firariantsoa vitsivitsy dia mbola tsy vitako ihany... dia eto amin'ny blaogy no miala vonkona.
Amin'ny maha-kristianina ahy dia mankalaza ny noely amin'ny maha fahaterahan'i Kristy azy aho. Fa mahatsiaro manokana ireo izay tsy kristianina sy tsy mivavaka ihany koa indrindra indrindra. Noely toa inona no ankalazain'ny tsirairay? Tsy fifaliana ve? Tsy fanantenana ny hisian'ny fiadanana ve? Tsy ny fiandrasana ny maraina vaovao ve? Tsy ny fifankatiavana ve? Tsy ny fitiavana ve? Koa na kristianina na tsia dia toa mitovy ihany ilay fety nandrasana. Fifaliana fa nisy zava-baovao tonga indray.
Koa dia mirary soa sy fanambinana ho antsika rehetra izay sendra mamaky ity blaogy ity. Na ny mpino na ny tsy mpino. Na izay niandry noely na izay tsy niandry. Samy hahazo ny anjara fiadanana sy fifaliana tadiaviny avokoa.